Somalia: Ahlu-sunnah oo la wareegay magalaada Dhuusamareeb
Home Somali News Somalia: Ahlu-sunnah oo la wareegay magalaada Dhuusamareeb
Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galguduud ayaa sheegaya in ciidamo badan oo ka tirsan kuwa ahlu-sunnah ay subaxnimadii hore ee maanta la wareegeen dhamaan xarumaha maamulka ee Dhuusa-mareeb.
Sida ay sheegayaan goobjoogyaal ku sugan magaalada, malayshiyada ahlu-sunnah ayaa ka yimid dhanka Guriceel oo ay la wareegeen mar sii horeysey, waxaana isla saakey dagaal magaalada ku dhexmarey iyaga iyo ciidamada Dowladd Federaalka ka joogey Dhuusamareeb.
Lama oga khasaaraha ka dhashey dagaalka, waxaana uu dhacay xilli dadku aysan weli guryahooda ka soo bixin.
Afhayeenka Ahlusunnah Cabdunuur Jaamac ayaa sheegey in ay subaxnimadii hore si nabadgelyo ah ula wareegeen, ujeedada duulaankooda ayuu ku sheegay in sababtu ay tahay muddo 8 ano ah ay ka talianyeen, ee aysan jirin isbedel kale.
Ciidamada Dowladda ayaa magaalada isaga baxay, waxaana wararka u danbeeyey sheegayaan in magaalada inteeda badan lagu arkaayo Malayshiyaadka Ahlu-snnah.
Dhuusamareeb waa halka la doonaayo in ay xarun u noqoto maamulka la doonaayo in lagu dhisaayo Cadaado, inkasta oo aan la isku raacsaneyn.
Dagaalo horey uga dhacay ayaa Ahlu-Sunnah looga saarey Dhuusamareeb oo ay muddo dheer ka soo talinayeen.
Ururka Ahlu-sunnah ayaa si weyn uga caraysan in abaalkoodi loogu gudey in banaanka la dhigo, kadib markii ay magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guriceel ay ka saareen malayshiyaadka al-Shabaab dhamaadkii 2009.
Somaliland: Cali Mareexaan Oo Goob Caafimaad Oo Suuqa Badhtankiisa Ah Ku Iibinaya Qiimo 2 Milyan Oo Dollar
The man who wants to make Djibouti the next Dubai
Somaliland: Daawo Jamaal Cali Xuseen Oo imika ku dhawaaqay mawqifkiisa rasmiga ah
SOMALILAND:Madaxweyne Siilaanyo Oo Xadhiga Ka Jaray Wejigii Koowaad Ee Dhismaha Dawgacad